Kiiska Ninkii Soomaaliga ee Weerarka Ka Geystay Dalka Canad oo dib loo dhigay | Baled Weyn Media Center
Kiiska Ninkii Soomaaliga ee Weerarka Ka Geystay Dalka Canad oo dib loo dhigay
Abdulahi Hassan Sharif oo 30-jir ah ayaa shalay la soo taagay Maxkamad ku taalla magaalladda Edmonton ee Gobalka Albert isagoo lagu soo oogay 11-Kiis oo ay ku jiraan inuu tooreey ku dhaawacay Sarkaal Bolis iyo inuu dhowr qof jiirsiiyey gaarigiisa habeenkii Sabtida ee la soo dhaafay.
Eedeysanaha ayaa la keenay Maxkamadda isagoo watay Dharka Maxaabiista ee midabka Jaallaha leh, iyadoo uu Nin Somali turjumaan ka ahaa qaadista Dacwadaasi.
Madasha Maxkamadda waxaa joogay qaar ka mid ah Jaalliyadda Soomaalida ku nool Edmonton, kuwaasi oo horey u cambaareeyey Weerarkaasi.
Qareenka Eedeysanaha oo lagu magacaabo Jaadi Mustarax ayaa sheegay in Ogeysiis Kooban loogu sheegay inuu dhinaca Sharciga ka taageero Eedeysanaha, wuxuuna xusayin loo baahan yahay in la helo Qareen kale si ay Dacwadda u sii socoto.
Dhinaca kale, Xeer-beegtida Maxkamadda Edmonton ayaa amartay in Eedeysanaha Abdullahi Hassan Shariif lagu sii hayo Xabsiga, iyadoo Dacwadiisa dib loo dhegeysan doono bisha November 14-da ee sannadkan.